०७५ साउन १० गते – डाक्टर केसीको अनशन र यक्ष प्रश्नहरू ! – इन्सेक
०७५ साउन १० गते - डाक्टर केसीको अनशन र यक्ष प्रश्नहरू !
डाक्टर केसीको अनशन र यक्ष प्रश्नहरू !
१) अबको दश वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा मेडिकल कलेज स्थापनार्थ आशय पत्र प्रदान नगर्ने भनेको २०७२ असारपछि हो वा जुन दिन कानुन बन्छ त्यस बेलादेखि लागु हुने हो ?
३) कतै एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटालाई भन्दा सम्बन्धन नदिने भनिएको छ कतै एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल कलेज हुने भनिएको छ । यस्ता बन्धनले पनि अन्यौल सिर्जना गरेको छ । पाँचभन्दा बढी जिल्ला भएका प्रदेशमा मेडिकल कलेज कसरी विस्तारित हुने भन्ने प्रश्न छ ? (सबैभन्दा कम जिल्ला भएको प्रदेश २ मा नै आठ जिल्ला छन् ।) जब कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्व विद्यालयबाहेकले अहिलेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छैनन् । विश्वविद्यालयले आफू रहेको प्रदेशमा मात्र सम्बन्धन दिन पाउने भनिएकोले ज्ञानलाई भूगोलमा संकुचन हुन जान्छ । साथै कुनै प्रदेशमा बाक्लो आवादीका ठाउँ धेरै छन् तर कुनैमा जनसङ्ख्या कम छ । यस्ता विषयको सम्बोधन जरुरी देखिन्छ । यो विषय आफैँमा विरोधाभास हुँदैन र ?
५) १३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये सात वटाले मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेको अवस्था छ । अन्यको क्षमता छैन भनिन्छ । यसले माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने पो हो की ?
६) माथेमा प्रतिवेदनमा हेर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका सीमित सङ्ख्याका मेडिकल कलेजको एकाधिकार धेरै वर्षछिसम्म रहिरहने स्पष्ट देखिन्छ ।